စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ လေ၊ မြေနှင့်ရေအတွက်အဘယ်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသနည်း။ | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
နူရီယာ | | အစိမ်းရောင်အိမ်, ပတ်ဝန်းကျင်
အမှိုက်သရိုက်များကိုမည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်ရသည်မှာကမ္ဘာအနှံ့ရှိအထူးသဖြင့်လူ ဦး ရေအများအပြားရှိမြို့ကြီးများစွာ၌ဆိုင်းငံ့ထားသောပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည် စွန့်ပစ်၏ကြီးမားသောပမာဏ ၎င်း၏မြို့သားတို့ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တိကျသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံပြaနာတစ်ခုဖြစ်လာသည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အစိတ်အပိုင်းများစွာအတွက်အလွန်လေးနက်သော။
2 စွန့်ပစ်သောအစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်လေ၊ မြေနှင့်ရေကိုညစ်ညမ်းစေသည်
အော်ဂဲနစ်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခွံများ၊ အစားအစာအပိုင်းအစများ၊ တစ်သျှူးစက္ကူ (ပိုး၊ သိုးမွှေးနှင့်ချည်) စသည့်ဇီဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်း။ ဤသည်များမှာ degradable စွန့်ပစ်.
အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သော: တွင်းထွက်ပစ္စည်းများနှင့်ဒြပ်ပစ္စည်းများ (သတ္တု၊ ဖန်၊ ပလတ်စတစ်ကတ်ထူပြားများ) ။ အီလက်ထရောနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း. သူတို့ဟာဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး.
သန့်ရှင်းရေးအသုံးချဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ပစ္စည်း (ပိတ်ကျဲစ၊ အနာကပ်စည်း၊ ချည်)၊ အိမ်သာစက္ကူ၊
La သန့်ရှင်းသောအမှိုက်သရိုက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများအတွက်စိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် သူတို့ကအမှိုက်တွေကိုတကယ်စဉ်းစားနေတယ်.
အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည် သစ်သီးပင်များနှင့်သစ်ပင်များနှင့်အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက်ဆွေးထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အချို့သောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မြေသြဇာများ၊ အိမ်လုပ်ဆွေးများသို့မဟုတ်အစားအစာများဖြစ်လာသည်။
သို့သော်အလေးနက်ဆုံးပြproblemနာမှာ သန့်ရှင်းသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်အညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးကိုရောနှောခြင်း အမှိုများသို့မဟုတ်မြေဖို့ခြင်းများသို့သွားပြီးအစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ရရှိသည်အထိပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဤအတောအတွင်းတွင်အမှိုက်သရိုက်အမျိုးမျိုးကိုအတူတကွရှိခြင်း မြေဖို့မြေသည်လေ၊ မြေနှင့်ရေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည် ယေဘုယျအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏အရည်အသွေးကိုကျဆင်းစေခြင်း၊ အထူးသဖြင့်မြေဖို့ခြင်းများအနီးအနားရှိမြို့ကြီးများတွင်လူများ၏သိသိသာသာပါဝင်မှုများဖြစ်သည်။
El လေသည်ဓာတ်ငွေ့များဖြင့်ညစ်ညမ်းသည် အမှိုက်သရိုက်များပြိုကွဲခြင်းမှလာသည် ကြမ်းပြင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်၎င်းနှင့်အတူရောနှောပါက၎င်းကိုလည်းထိခိုက်သည် ဂီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပင်လယ်နှင့်မြစ်များထဲသို့တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်သောအခါသို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာလေထုနှင့်သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့သောအခါဖြစ်ပေါ်သောဓာတုဓာတ်ပြုမှုများဖြစ်ပေါ်စေသောအဆိပ်အတောက်များကိုဆေးကြောသောအခါ၎င်းသည်ပြောင်းလဲသွားသည်။
အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပုပ်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ သူတို့ကဲ့သို့: မီသိန်း (CH4)၊ နိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုဒ် (N20), ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ (CO2) ။ ၎င်းအဆိပ်သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်လေထုထဲတွင်နှစ်ပေါင်းငါးရာခန့်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤဓာတ်ငွေ့များအတွက်တာဝန်ရှိသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု နေရဲ့ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပူကိုဖမ်းယူပြီးအပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု (ကမ္ဘာမြေ၏အပူချိန်တိုး) ။ သိပ္ပံပညာရှင်များကခန့်မှန်းကြသည် ကမ္ဘာဂြိုလ်အပူချိန် တတျနိုငျသ 1,5 မှ5,5ºအကြားတိုးမြှင့် လေထုထဲသို့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်မထားဘူးဆိုရင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း » အစိမ်းရောင်အိမ် » စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်း
agustina cabrera ဟုသူကပြောသည်
agustina cabrera အားပြန်ကြားပါ
Franklin နှင့် Jimi ထုတ်ဝေသူများ XNUMX B ဟုသူကပြောသည်
IE ACGR မှဆgrade္ဌမတန်း B ကျောင်းသားများသည်ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကိုဆက်လက်မညစ်ညမ်းစေရန်အတွက်အမှိုက်များကိုရွေးချယ်ရန်ကတိပေးထားသည်။
Franklin နှင့် Jimi Publishers XNUMXth B သို့အကြောင်းပြန်ပါ